Vidin-tsolika iraisam-pirenena Mitotongana no sady miiba
Tafalatsaka ambany be ary miiba (négatif) mihitsy ankehitriny ny vidin’ny solitany vokatry ny krizy nateraky ny aretina coronavirus.
Tafidina hatrany amin’ny 306% izay manome -37,63 dolara izany raha ny tondron' ny vidin’ny solitany manerantany WTI (West Texas Intermediaire) no jerena ho amin’ny famarotana (livraison) ny volana mey ho avy izao. Ny tondro faharoa fandrefesam-bidy Brent ihany koa dia maneho ny fitotonganam-bidy hatrany amin’ny 18% izay manome 20,43 dolara. Lavitry ny 50 dolara tanteraka ihany koa ny barila amin’ny livraison volana Jona satria mihena 18% izany izay manome 20,43 dolara. Antony mahatonga fatiantoka ny tsy fifandanjana be loatra misy amin’ny tolotra sy tinady. Be loatra ny tolotra satria raha ny any Etazonia fotsiny dia efa niakatra hatrany amin’ny 19 tapitrisa barila ny tahiry anatin’ny herinandro monja.